Nkwupụta Mgbasa Ozi Social | Okporo ụzọ ka Mgbakwunye
09/23/2021 10:51 elekere GMT
Ndị na-esonụ na-akọwa Social Media Ngosipụta maka My Traffic Blog website.
Okwu Mgbasa Social
Anyị na-ebi na oge na-atọ ụtọ mgbe a na-akwado ikike nzuzo n'akụkụ njikere afọ ofufo nke ndị mmadụ iji kọọrọ ụwa ha mmekọrịta chiri anya na nke kachasị mma, ọbụlagodi na ebe ndị dị ka ebe nrụọrụ weebụ My Traffic Blog. Ọ bụ ezie na o doro anya na ọ dị mma n'elu, ihe egwu nke enweghị nkwupụta ọha na eze na-ekpughe ihe ọmụma dị nro na-amalite ịmalite.
A na-ebo ndị na-egwu egwuregwu mgbasa ozi egwu egwu maka iji ha eme ihe n'ụzọ na-enweghị ikike ma ọ bụ n'ụzọ na-ezighị ezi. Enweghị ike ichebe na ịdọ aka na ntị nwere ike bụrụ ihe ndị gbadoro ụkwụ. A na-ede akwụkwọ ikpe na-achọ mmebi maka nkwupụta ndị metụtara kpatara ọnwụ mmadụ ma ọ bụ igbu onwe ha. Ndị na-ede blọgụ na-akwado ịrụ ọrụ n'okpuru nnwere onwe ikwu okwu na-enweghị mgbagha ma ọ bụ oke ohere enyere ndị otu akwụkwọ akụkọ na-efunahụ ikpe obodo maka nkwutọ, nkwutọ, nkwutọ, na ihe ndị ọzọ.
Dika usoro mgbasa ozi na-aga n’ihu n’ikwe ka mgbasawanye nke teknụzụ na mgbasawanye dị mfe, ọdịda nke mkpughe n’enweghi oke na-arị elu. Ya mere, iji nlezianya na-erite uru nke mgbasa ozi mmekọrịta, ebe ị na-ewepụ nsogbu nke nkwupụta na-enweghị isi, nwere ike ịkwado ahụmịhe ntanetị na-atọ ụtọ, na-enweghị nsonaazụ nke oke, na ntọala dị ka weebụsaịtị nke My Traffic Blog.
Ọnụnọ / Ọdịdị nke Social Media
Ikwesiri iche na mgbasa ozi mmekọrịta anyị na ebe nrụọrụ weebụ My Traffic Blog. Igodo bọtịnụ dị mfe iji kwado mmadụ, ngwaahịa, ma ọ bụ ọrụ na-ewulite profaịlụ gbasara gị, nke ị kwesịrị iche na ndị ọzọ ga-achọpụta. Gbalị ịkọrọ mmadụ weebụsaịtị, ma ọ bụ site na pịa bọtịnụ ma ọ bụ site na izipu ozi e mere ka ọ rụọ ọrụ na weebụsaịtị, ị kwesịrị iche na nke a nwere ike ọ gaghị akwụsị na nnata ahụ ezubere, yana na nke a nwere ike iwepụta ozi gbasara gị nke enwere ike ịhụ site na ọnụ ọgụgụ na-enweghị ngwụcha nke ndị mmadụ. Dị otú ahụ a domino mmetụta pụrụ ibido ebe a na m Traffic Blog na ebe nrụọrụ weebụ.
Ihe dị mfe dịka blog comment na-enye ohere maka mmeghachi omume ikpere nke nwere ike bụrụ nke ọha na eze nwere ike ọ gaghị anọchite anya ọnọdụ (ọbụlagodi na ike ma ọ bụ ike) nke ị nwere ike ijide mgbe oge nke ịtụgharị uche karịa. Ikwesiri iburu n'uche na ịdị mfe nke ịnweta otu saịtị site na nzere nbanye nke onye ọzọ, ma ọ bụ iji nbanye zuru ụwa ọnụ maka ịnweta ọtụtụ saịtị nwere ike ịkwado gị na omume gị n'ịntanetị nke nwere ike ikpughe ozi ndị ọzọ na-atụghị anya karịa gị. nwere ike ịchọpụta ma ọ bụ chọọ. Ihe ọ bụla ma ọ bụ ihe ndị a niile nwere ike ịdị na ebe nrụọrụ weebụ m na Traffic Blog n’otu oge ma ọ bụ ọzọ.
Ihe atụ ole na ole ndị a na-egosi ụzọ ụfọdụ enwere ike ịdị na mgbasa ozi mmekọrịta, ọ bụ ezie na ọ bụghị ndepụta zuru oke na teknụzụ ọhụrụ ga-enye ndepụta a oge ochie. Ebumnuche bụ ịghọta iru nke mgbasa ozi mmekọrịta, ọnụnọ ya na ebe nrụọrụ weebụ n'ụdị dị iche iche (gụnyere weebụsaịtị a), wee zụlite ụzọ dị mma iji ya.
Ikpuchido Ndị Ọzọ
Ikwesiri ighota eziokwu nke na divulgences mere na na ntanetị mgbasa ozi na ebe nrụọrụ weebụ a na ndị ọzọ anaghị egbochi gị. A na-eme nkwupụta okwu banyere ihe metụtara otu metụtara ndị ọzọ na-emetụta ma na-emetụta ndị ọzọ. Ihe ngosi ndi ozo bu ihe ndi ozo, mgbe ufodu enweghi ezi uche. Ihe nwere ike ịpụta na-atọ ọchị n’otu oge nwere ike bụrụ ihe nwute n’ọzọ. Na mmegwara “ọha” nke aghụghọ nwere ike inwe nsogbu ụbọchị ndụ niile.
Iji usoro mgbasa ozi na-arụ ọrụ nke ọma na weebụsaịtị anyị ga-egbochi nkwupụta gị nke ọma metụtara gị, ọ bụghị ndị ọzọ. Ọ bụrụ n’inwe obi abụọ, ọ kachasị mma ịmehie n’akụkụ nke anaghị ekpughe. O doro anya na ngosi a bara uru nke na enweghị ike wezuga ya site na ịkpachara anya nke ime ihe iji chebe ọdịmma kachasị mma nke onye ị kpughere site na mkpebi gị igosipụta ihe na weebụsaịtị My Traffic Blog (ma ọ bụ ọzọ).
Ichebe Onwe Gị
Shouldkwesịrị ị kwụsịtụ iji tụlee mmetụta dị ogologo oge nke mkpebi nkewa-nkewa iji kesaa ozi nzuzo banyere onwe gị na weebụsaịtị Weebụsaịtị Blog m na okporo ụzọ. Echiche, mmasị, ihe ndị na-adịghị amasị, mmasị, na n'ụzọ ndị ọzọ nwere ike ịgbanwe. Ikwupụta echiche dị iche iche ị nwere taa, nwere ike imegide echiche gị na-emepe emepe n'ọdịnihu. N'agbanyeghị nke ahụ, "ọhụụ gị" ga - adịkarị njikere karịa nkwupụta ndị izizi ị mere bụ ndị a kwadoro ugbu a dịka akụkụ nke profaịlụ ọha gị. Ọ bụ ezie na ọdịnaya nke nri ụtụtụ gị nwere ike ịnwe obere mmetụta dị ogologo oge, data ndị ọzọ n'otu aka ahụ kesara ngwa ngwa nwere ike inwe nsonaazụ nke nwere ike ịmetụta ikike gị ịnweta ụfọdụ ọrụ ma ọ bụ gbochie ahụmịhe ndụ na ebumnuche ndị ọzọ.
Dị ka ịkekọrịta ozi gbasara ndị ọzọ, ị ga-akpachara anya nke ukwuu tupu ị mata ihe banyere onwe gị. Ọ bụrụ na enwere obi abụọ, ọ ga-akacha mma ịghara ime ya. Nsonaazụ dị mkpirikpi, ọ bụrụ na ọ dị, nwere ike ịba ụba ngwa ngwa site na nsonaazụ ọzọ. N'ikpeazụ, ị ga-ahụrịrị na anyị enweghị ọrụ maka iwepu ọdịnaya otu oge ekekọrịtara, anyị nwere ike ọ gaghị enwe ike ịme ya.
Mmachibido iji Social Media Data
Gị, dị ka onye ọbịa na weebụsaịtị My Traffic Blog, enyeghị gị ohere "m" mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ nyiwe ndị ọzọ dị n'ime ebe a maka ozi nkeonwe metụtara ndị ọzọ. Ọbụna ebe ndị mmadụ gosipụtara data n'ihu ọha, ekwesighi ịkọwa ya na a ga-asị na ị nwere ikike ijide ozi ahụ, mụta ya ma ọ bụ jiri ya mee ihe. Ojiji nke mgbasa ozi mmadụ ma ọ bụ nyiwe ndị metụtara ya na weebụsaịtị anyị bụ maka iji mmekọrịta naanị, dị mkpa naanị n'oge nleta weebụsaịtị.
Eziokwu nke Social Media Data
Dika ulo oru ntaneti mgbasa ozi obula e wuru na ihe ndi emeputara ya, i gha atule eziokwu a mgbe ichoro ka odidi nke ihe obula iguru. Anyị anaghị ahụ maka inyocha ọdịnaya ọdịnaya onye ọrụ ọ bụla maka izi ezi. Usoro kachasị mma ga-abụ ilele ọdịnaya niile dị ka echiche siri ike, ọ bụghị eziokwu.
Ihe Ga-enyere Gị Aka Ibu Ọrụ
I kwesịkwara iburu n'uche eziokwu ahụ bụ́ na okwu gị pụrụ ịkpalite nsogbu maka nsogbu ndị ọzọ kpatara. Ọ bụ ezie na inwere ikike ikwu okwu, ị nweghị ikike imebi ndị ọzọ. N'okpuru ụkpụrụ bụ isi nke ịta iwu, ị na-ahụta ihe niile, n'onwe gị, maka ọnọdụ ebe:
1. Achọrọ ka ị rụọ ọrụ, mana ịmeghị (ntụgharị - ụfọdụ "ọrụ nlekọta")
2. achọrọ ka ị hapụ ime ihe, mana ịmeghị (ntụgharị - nkwutọ, nkwulu, wdg)
Ndị a “mmehie omission na ọrụ” nwere ike ịkpatara gị nsogbu, na agbanyeghị ma ị na-ekwu na ị na-azụ ahịa na nzuzo nke otu ụlọ ọrụ azụmahịa ma ọ bụ karịa. Omume na-ezighi ezi na enweghị ụkpụrụ, mgbe emere ya na aha ụlọ ọrụ ma ọ bụ LLC, bụ iwu na-akwadoghị na usoro enweghị isi. Ebe ọ bụ na ọ naghị adịkarị akụkụ nke atụmatụ azụmaahịa itinye aka na omume ezighi ezi na nke na-adịghị mma, ị na-arụ ọrụ ọ bụla na ikike ọ bụla, kama nke ahụ, ikekwe, na-eji ikike ahụ eme ihe iji mebie mmejọ nke onwe gị. Kwesịrị ịkpọtụrụ onye ọka iwu nyere ikikere ma ọ bụrụ na ịchọrọ ndụmọdụ gbasara iwu gbasara (ikike) ịkọwapụta ọnọdụ gị ma ọ bụ nsogbu iwu nke sitere na weebụsaịtị a ma ọ bụ ọzọ.